Itoophiyaa: Naannoo rakkisaatti dirooniin tajaajila wallaansaa eegaluuf - BBC News Afaan Oromoo
Itoophiyaa: Naannoo rakkisaatti dirooniin tajaajila wallaansaa eegaluuf
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa biyyattiitti naannoo geejjibaaf rakkisaa ta'eetti tajaajila wallaansaa diroonii (xiyyaara nama malee balali'u) kennuuf filannoo teknooloojii gaggeessaa jiraachuu beeksise.
Teknoloojii diroonii kanatti fayyadamuun naannoolee tajaajila geejibaa argachuu hindandeenyee fi baadiyyaa gahuuf rakkisaa ta'aniitti talaallii, dhiigaafi qorichoota lubbuu baraaruuf oolan hanga kg5 ta'anii fi meeshaalee wallaansaa geessisuuf ni dandeessisa jedhameera.
Baalleen xiyyaaraa konkoolaataa miidhe
Xiyyaara har'a Neeppaaliitti kufeen yoo xiqqaate namoonni 49 du'an
Kana malees sababiiwwan akka lolaa fi walitti bu'iinsaatiin daandiin yoo cufame, qorichaa fi dhiiga atattamaan qaqqabsiisuuf akka gargaaran Ministirichatti Daarektarri teknolojii odeeffannoo fayyaa obbo Iyyoob Kabbadda eeruun EBCn gabaaseera.
Ministirichis torban ammaan dhufan keessatti filannoon teknolojii xumuramee bara haaraatti tajaajilicha eegaluuf qophii xumuruusaa itti gaafatamtichi ibsaniiru.
Kana malees ministirichi Siivil Aviyeeshinii, Ejansii Nageenya Odeeffannoo (INSA) fi qaamolee dhimmisaa isaanii ilaalatu kan biraa waliin haala hojiirra olmaa isaarratti marii taasisuus obbo Iyyoob ibseera.
Chaayinaan xiyyaara guddaa 'AG600 Kunlong' jedhamuufi bishaanii fi qilleensarra deemu agarsiifte
Taaksii shofeera malee qilleensarra balali'u yaabachuu feetu?
Viidiyoo Xiyyaarri hoteelatti geeddarame kun akkamiin as qubate?
6 Guraandhala 2018
Jaappaan keessatti baalleen xiyyaara jeettii konkolaataa miidhe
Dubartii osoo hin baratin wal'aansa baqaqsani hodhuu gaggeessan